Ekwentị 5G ga - ere nkeji 200 na 2020 | Gam akporosis
5G ekwentị rere gafere 200 nde na 2020
Ugbu a anyị nwere ike ịzụta ihe nhọrọ nke ekwentị nwere 5G na Spain na n'ọtụtụ ahịa na Europe. Ọzọkwa, n'ọnwa ndị ikpeazụ nke afọ anyị nwere ike ịtụ anya nke ahụ ụdị ndị ọhụrụ ga-abata na njikọ a gaa ahịa, OnePlus bụ otu n'ime ụdị nke gosiputala ya. Nke pụtara na ụdị ekwentị ndị a na-enwewanye ahịa.
Ọ bụ ezie na ọ ga-abụ na 2020 mgbe a na-agbasawanye nhọrọ nke ekwentị 5G na ahịa. Ebe ọ bụ na ọtụtụ ụdị na gam akporo ga-ahapụ anyị na nke a na-esote afọ na ekwentị ha dakọtara. Nke a ga - egosipụtakwa na ire ahịa ya zuru ụwa ọnụ, dị ka ọtụtụ ndị nyocha kwuru.
Ihe omuma ohuru gosiputara na 2020 a ga - ere ihe karịrị nde ekwentị 200 na 5G gburugburu ụwa. Ya mere o doro anya na ụdị ekwentị ndị a ga-eme nnukwu ọdịiche na ahịa. Ọzọkwa, ọnụ ọgụgụ ndị a na-anọchite anya ịrị elu dị ịrịba ama ma e jiri ya tụnyere atụmatụ ndị gara aga.
Ọnwa ole na ole gara aga e mere atụmatụ na ahịa ndị a ga-akarị otu narị nde. Yabụ enwere nchekwube n'etiti ndị nyocha. Agbanyeghị na ahịa ndị a ga-elekwasị anya na ahịa ụfọdụ, dị ka China ma ọ bụ South Korea, nke bụ ndị na-eme ahịa ndị a ugbu a.
N'ihe banyere Europe, Ekwentị 5G ga - enweta ọnụnọ na 2020. Agbanyeghị na dabere na mba ahụ, ọ gaghị abụ rue 2020 ma ọ bụ 2021 mgbe anyị ga-ahụ mmụba nke ahịa ma ọ bụ na ekwentị na-abata n'ụzọ zuru oke yana ndakọrịta. Yabụ enwere ohere maka uto n'ọhịa a.
Ya mere, anyị ga-echere iji hụ ma ekwentị 5G ga-emezu atụmanya ndị a. Ọ ga-adabere n'ụzọ dị ukwuu na ọsọ nke mba nwere netwọkụ ha ga-eji. Ebe ọ bụ na nke a bụ ihe ga-o doro anya mbo mbuli ire nke dakọtara igwe.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Ngwa gam akporo » Mobiles » 5G ekwentị rere gafere 200 nde na 2020
Ekwentị Vivo ọzọ na-edebanye aha na nchekwa data TENAA na batrị 5000 mAh
Huawei ga-enweta mgbakwunye ụbọchị 90 site na United States